Home News Howlgalo balaaran oo ka socda Boosaaso ka dib falalkii ka dhacay
Howlgalo balaaran oo ka socda Boosaaso ka dib falalkii ka dhacay
Ciidamo ka tirsan Booliska Dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxa ay howlgallo culus ka wadaan Xaafado ka tirsan Magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari,halkaas oo mararka qaar ka dhacaan falal amnidarro.
Howlgalka ayaa sida la sheegay waxaa hoggaaminaya taliyaha ciidanka Booliska Puntland Muxudiin Axmed Muuse oo shalay gaaray halkaas,waxaana laga sameynayaa inta badan Xaafada Magalada Boosaaao.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in howlgalka uu amray Madaxweynaha Cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, kadib markii dilal qorsheysan ay ka dhaceen Magalada Boosaaso.
Saraakiisha howlgalkaas hoggaamineysa weli wax faah faahin ah kama bixin,hayeeshee dad ku sugan Boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in lagu qabqabtay dad u badan dhalinyaro oo ku sugan Xaafadaha Magaladaas.
Boosaaso aya dhawaan waxaa lagu dilay Madaxii mashruuca shirkadda DP World u qaabilsanaa dekada Boosaaso,waxaana horay uga dhacay dilal kale oo loo geystay Ciidamo iyo dad kale.